Otú Alaeze Chineke Si Na-emeri Ndị Iro Ya—Ndịàmà Jehova Ji Iwu Eme Ka A Hapụ Ha Ka Ha Na-ekwusa Ozi Ọma | Alaeze Chineke
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Foto nke aka ekpe: Ebe onye uwe ojii chọrọ ịnwụchi otu nwanna maka na ọ na-ezi ozi ọma. Nwanna a nọ n’obodo Aịndhovun, dị na Nedalandz, na-ezi ozi ọma n’afọ 1945; foto nke aka nri: Iwu obodo unu ò kwuru na e kwesịrị ịhapụ unu ka unu na-ezi ozi ọma?
KA E were ya na unu gara ozi ọma otu ụbọchị. Unu abanye n’otu ụlọ, onye gị na ya so ebido ziwe onye unu hụrụ n’ebe ahụ ozi ọma. Ka ọ nọ na-ezi onye ahụ ozi ọma, unu anụ ụda saịrin otu ụgbọala gbu na-abịa. Ka ụgbọala ahụ nọ na-abịa, ụda saịrin ahụ ana-adasikwu ike. Mgbe unu si n’ụlọ ahụ pụta gaa n’ụlọ ọzọ, gịnwa ebido ziwe onye nwe ụlọ ahụ ozi ọma. Ka ị nọ na-ekwu okwu, ụgbọala ahụ agbarute ebe ahụ unu nọ, kwụsị. Onye gị na ya so elewe ụgbọala ahụ anya, mata na ọ bụ ndị uwe ojii. Otu onye uwe ojii esi n’ụgbọala ahụ pụta jụọ unu, sị: “Ọ̀ bụ unu bụ ndị a sị na-aga n’ụlọ ndị mmadụ ezi ha ozi ọma ebe a? Ọtụtụ ndị sị na unu ji ozi ọma unu a enye ha nsogbu.” Mgbe o kwuchara, unu emeda obi gwa ya na unu bụ Ndịàmà Jehova. Olee ihe ọzọ i chere nwere ike ime?
Ọ bụ otú ndị ọchịchị obodo unu si ele Ndịàmà Jehova anya ga-ekpebi ihe ọzọ ga-emenụ. Kemgbe ọtụtụ afọ, olee otú ndị ọchịchị obodo unu sirila meso Ndịàmà Jehova ihe? Hà na-ekwe ka unu na-efe Chineke otú ọ chọrọ? Ọ bụrụ na ha na-ekwe unu, ọ ga-abụ n’ihi otú ụmụnna anyị sirila gbasie mbọ ike n’oge gara aga jiri iwu mee ka a hapụ anyị ịna-ekwusa ozi ọma. (Fil. 1:7) N’agbanyeghị obodo i bi, ọ bụrụ na ị gụọ gbasara ikpe ndị anyị meriri na ha, ma chebara ha echiche, ọ ga-eme ka okwukwe gị sikwuo ike. Ná nkebi a, anyị ga-eleba anya n’ụfọdụ ikpe ndị ahụ anyị meriri. Ikpe ndị a na-egosi na Alaeze Chineke bụ ọchịchị dị adị, ma ọ́ bụghị ya, e nweghị ihe anyị gaara emeli.
Ụfọdụ ndị ọkàikpe e nwere n’oge a na-eme ihe Gameliel, onye na-akụzi Iwu, mere n’oge ndịozi Jizọs.
Mgbe a na-emekpọ Ndịàmà Jehova ọnụ maka na ha jụrụ iso na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị a na-echetụdịghị n’echiche na ha ga-agbatara ha ọsọ enyemaka gbataara ha ọsọ enyemaka.
Ndị Chineke emeela ihe niile ha nwere ike ime ka e kwe ha ịna-erubere Chineke isi.